Nezvedu - Xuzhou Lena Import Export Co., Ltd.
Xuzhou Lena Import and Export Co., Ltd., inogadzira mabhodhoro egirazi akagadziridzwa muChina, ane makore anopfuura gumi nemaviri echiitiko mukupa magirazi ekurongedza mhinduro.
Isu tinopa akasiyana mabhodhoro egirazi ekurongedza, semabhodhoro ezvinwiwa, mabhodhoro ejusi, mabhodhoro emukaka, mabhodhoro econdiment, mabhodhoro ezvekuzora, mabhodhoro aromatherapy, mabhodhoro emafuta akakosha, zvibatiso zvekenduru, zvirongo zvehuchi, zvirongo zvejamu, zvirongo zvekofi, zvirongo zvekuchengetera chikafu, nezvimwe nezvimwe. .
Isu tine yakasarudzika dhizaini timu inogona kugadzira bhodhoro rekurongedza raunoda zvichienderana nemazano ako.Isu tinoremekedza uye tinotsigira kwekutanga uye kushandura pfungwa dzako kuita chokwadi.Zvichave zvemashiripiti zvakadii izvi.
Zvigadzirwa zvedu zvegirazi zvakaongororwa zvemhando yepamusoro, zvinoenderana nemamiriro ekunze uye ekunze kwenyika, uye kuongororwa kwerutsigiro.Panguva imwecheteyo, dhipatimendi redu rekugadzira rine yakakwana yekugadzira manejimendi system yekunyatso kudzora mitengo uchidzora mhando kuitira kuti uwedzere purofiti yako.
Kambani yedu zvakare ine ese-emagetsi decal michina yekugadzira yakadzama kugadzirisa kwemabhodhoro egirazi.Maitiro edu akadzika anosanganisira decal, silk screen printing, inopisa stamping, frosting, sandblasting, kupenda uye electroplating, etc. OEM neODM order inogamuchirwa, isu tinofara kugadzira kana kugadzira mabhodhoro ako ega ega, akafanana chaizvo nepfungwa yako uye kudhirowa.Zvatinoda kuita kupa sevhisi-yega kushamwari yese.
Chikwata chedu chekutengesa chekunze chine hunyanzvi hwekutaurirana uye chinogona kunzwisisa zvinonetsa zvevatengi vedu.Mushure memakore ekushanda nesimba, takagadzira hukama hwakanaka nevatengi vedu uye takakunda kuvimba kwavo nenyika.
Isu takazara nekuvimba mune zvigadzirwa zvedu uye tinogona kupa mahara samples yekuongorora kwako.Zvigadzirwa zvedu zvegirazi zvakatumirwa kune dzinopfuura 100 nyika nematunhu pasirese.
Kugamuchirwa kufekitari yedu kushanyira uye kutaurirana.